Precision Roller Chain Mugadziri, Anotengesa, Fekitori - anoderedza, honye anodzora, honye gearboxes, mapuraneti magiya, mabhokisi anomhanyisa, akasiyana, helical giya, sprial bevel magiya, ezvekurima magiya, ekurima maturakita, marori magiya, honye gearbox
Precision Roller Chain, Zvinhu uye Kubatanidza Backlinks
Iyo chaiyo simbi roller cheni ndeyechokwadi nzira inoshanda zvakanyanya uye inoshandisirwa yekufambisa masimba emuchina, ayo, panguva yekuranga kwekushandisa kwemaindasitiri, yakanyatsokwenenzvera zvakakwana mamwe ese marudzi eketani akamboshandiswa.
Rokunze Unganidzo - Dzvanya Fit (BS / DIN) Riveting Pin Link - Press Fit (ANSI)
Kuti ushandise neese saizi uye mhando dzeketani panochengetedzwa zvakakwana. Iyo yekubatanidza inopihwa nekutakura mapini akakwidziridzwa muplate yekunze. Iyo imwe ndiro yekunze kupindirana kwakaringana nezve mapini anotakura, iwo magumo ayo anofanirwa kukwikwidzwa pamusoro mushure mekunge ndiro yaiswa. Dhinda mutambo unobatanidza hyperlinks chaizvo zvinofanirwa kungo shandiswa nekukurumidza sekunge; nyowani dzekumashure zvinongedzo zvinofanirwa kushandiswa kushandisa kuchinjanisa kwakabviswa ma hyperlink. (Ona 'Riveting Chain Isingaperi' kuti uwane mirayiridzo izere).
Kubatanidza Chinongedzo - Slip Fit (BS / DIN / ANSI)
Hyperlink yekubatanidza yakapihwa mapini maviri ekubatanidza akamisikidzwa mundiro yekunze. Ndiro yekunze inowanzo kuve mutambo wekubvumidzwa kune mapini ekubatanidza uye inochengetedzwa muchinzvimbo nepini yakatsemurwa kuburikidza nekupedzisa kupera kwepini yega yega yekubatanidza.
Kubatanidza Webhusaiti chinongedzo - Slip Fit (BS / DIN / ANSI)
Inoshandiswa pamaketani mapfupi emakanda chete. Inopihwa mapini maviri ekubatanidza akakwenenzverwa mundiro yekunze, clearance match yekubatanidza ndiro ichichengetedzwa nenzira yechirimo clip, No. 27, iyo inorovera kumakomba ari mukati memapini.